“Coutinho iib maahan.”. Jurgen Klopp oo u deyriyay Barcelona – Gool FM
(Hong Kong) 21 Luulyo 2017. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay inuusan beec ahayn xiddigiisa Philippe Coutinho kaddib markii ay Reds diiday dalab 72 milyan oo bound oo kaga yimid camaaliqada Spain ee Barcelona.
Coutinho ayaa mustaqbalkiisa u hibeeyay Liverpool kaddib markii uu heshiis shan sano ah qalinka ugu duugay sanadan.
Klopp oo saxaafada la hadlay ka hor kulanka Finaka Asia Trophy oo ay Hong Kong kula yeelan doonaan Leicaster City ayaa diiday inuu ku madadaalo rajada in mid ka mid ah xiddigihiisa laf dhabarka uu kooxda ka tago wax ka yar bil inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub ee 2017-18.
“Haa, waxaan oran karnaa inuusan iib ahayn Coutinho,” Klopp ayaa sidaa yiri.
“Laakiin tani ma ahan oo kaliya tan iyo saakay ama shalay, ma hubo inay sinna wax kaga duwaneyd.
“Lama yaabin inay koox kasta xiiseynayso ciyaartoyda Liverpoo. Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah qolka dharbadelashada ay aad ula yaabeen, ma ahan ammaan, way cadahay in dadku arkaan inaan ciyaartoy fiican heysano.
“Laakiin laga yaabee fariin aad u muhiim ah, inaan iibineyn koox.
“Waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyno, waxaan aaminsanahay inana wada horumarno, waxaan wada dooneyn inaan si wada jir ah u qaadno talaabada xigta, si aan midaa u sameynana waxaan u baahanahay inaan wada joogno.”.
Bakayoko oo Chelsea ku soo dhaweeyay Alvaro Morata